Bayern Munich oo u Soo Baxday Quarter Finalka Koobka Champions League-ga ”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Bayern Municha ayaa u soo baxday quarter finalka koobka Champions League-ga,ka dib markii ay lugtii labaad garoonkeeda Allianz Arena 7-0 uga badisay kooxda Shakhtar Donetsk.
Garsoorihii ciyaarta William Collum ayaa daqiiqadii sedaxaad ee ciyaarta kaarka casaanka ah u taagay ciyaaryahan Oleksandr Kucher oo daacafa uga ciyaara kooxda Shakhtar Donetsk,kadib markii uu rigoore keenay.
Ciyaaryahan Thomas Mueller ayaa rigooradii gool u bedelay,waxana ay kooxda Bayern Munich qabatay hogaanka ciyaarta.
Ciyaaryahan Jerome Boateng ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa ciyaaryahan Franck Ribery goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich,halka goolka afaraad uu u sii raaciyay ciyaaryahan Thomas Mueller.
Ciyaaryahan Holger Badstuber ayaa daqiiqadii 63-aad ee ciyaarta goolka shanaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan Robert Lewandowski ayaa daqiiqadii 75-aad ee ciyaarta goolka lixaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan Mario Goetze ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka todobaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaa isku celcelis ahaan 7-0 uga soo baxday quarter finalka koobka Champions League-ga.